Andres Iniesta Oo Ku Dhawaaqay Inuu Ka Fadhiistay Ciyaaraha Caalamiga Ah | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Andres Iniesta Oo Ku Dhawaaqay Inuu Ka Fadhiistay Ciyaaraha Caalamiga Ah
Halyeyga khadka dhexe ee xulka qaranka Spain ee Andres Iniesta ayaa shaaciyey inuu si rasmi ah usoo gunaanaday ciyaaraha caalamiga ah ee xulka qarankiisa, isla markaana uu kulankii guul-darrada ay kaga baxeen ee Ruushku rikoodheyaasha kaga reebay Koobka Adduunka ahaa kii ugu dambeeyey ee uu xidho funaanadda qarankiisa.
Iniesta oo ay da’diisu tahay 34 jir ayaa markii ay ciyaartu dhamaatay waxa uu u warramay idaacadda Radio Estadio, waxaanu carrabka ku dhuftay in aanay hadhin ciyaar kale oo uu xidhan doono shaadhka qarankiisa.
“Waa run waxay ahayd ciyaartii iigu dambaysay xulka qaranka. Shaqsiyan waxay ii ahayd dhamaadka cutub cajiib ah oo noloshayda ah.” Sidaas ayuu yidhi Iniesta..
Kubbad sameeyahan oo dhowaan bixiyey funaanadda Barcelona, waxa uu sheegay in waayihiisa xulka qaranka Spain aanu ku dhamaanin sidii uu ku riyoonayey, waxaanu yidhi: “Waayahaygii halkan ayuu ku dhamaaday kaddib waqti dheer oo aan u ciyaaray Spain laakiin shay kastaaba waxa uu leeyahay meel uu ka bilaabmo iyo meel uu ku dhamaado. Ma aha sagootintii aan ku riyoonayey laakiin kubadda cagta iyo nolosha ayaa sidan noqon kara.”